Isixazululo, Ingxaki, Isisombululo sichaza: UMartin Vrijland
Ndandisoloko ndathetha malunga nomlinganiselo Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo. Kwiminyaka yakutshanje siye sabona amacala amaninzi okubulala kunye namanye amajelo kumaphephandaba apho kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba le yintsebenzo yengqondo (PsyOps) yokudlala kubantu. Kwinqanaba elincinane ndichazile indlela umdlalo Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo isebenza kunye nendlela oku kuyenziwe ngayo kwimeko eyaziwa ngokubulala zamandulo. Ngoko, ngokomzekelo, ndincoma eli nqaku en eli nqaku kuhle ukufunda kwakhona ngaphambi kokuqhubeka apha. Kubalulekile ukuba ufunde ngokugqibeleleyo amanqaku amabini kunye namavidiyo abekwe kuyo.
Zonke ezi ziganeko kunye nokusetyenziswa kobuqhetseba nokukhohliswa ngamajelo, ukuba abantu babe yindlela yokumkela imithetho emininzi kunye nemilinganiselo yamapolisa amaninzi, ndiphefumlele ukuba ndiyenze ingoma. Unokufumana (igumbi lokuhlala) ukurekhoda okuvakalayo kwividiyo engezantsi.
Ulawulo Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo lithetha kakhulu ukuba oorhulumente, ngokubambisana nabeendaba, bachazela abantu ingxaki enkulu. Ngokuqhelekileyo iDa yinkinga eyenziwe yedwa; zenziwe ngokusebenzisa iindlela zobugcisa befilimu ezinjengekripnoloji yesikrini, i-depthfakes, i-facial reenactment kunye nesofthiwe yokutshintsha ubuso. Ukuba ucofa kumanqaku axhunyiwe apha ngasentla, uya kufumana inkcazo ecacileyo yalezo zindlela.
Abantu baxhamla kwizinto ezikhuthaza kakhulu iimvakalelo zesisu kunye namajelo eendaba anceda ukukhupha impendulo phakathi kwabantu. Amacandelo afakekileyo afumaneka ukujonga uluntu. Ngamakhulu abasebenzi basekhaya bajonga ingxoxo ngokuzeleyo kwaye bafihla emva kokuthenjwa ngokufakela iiprofayili kunye nenethiwekhi yentlalo enokuthenjelwa (inzulu), unokulawula nayiphi na ingxoxo kwi-intanethi kwinqununu oyifunayo kwaye uhlasele ngokuthe ngqo nawuphi na umntu onombono ohlukileyo. Impendulo phakathi kwabantu iyakucatshukiswa, kodwa inokuthi iqhutywe. Ngenxa yokuba uthumele imvakalelo phakathi kwabantu ngokusebenzisa imidiya kunye nokujongana neendaba zoluntu ngokusebenzisa umkhosi we-troll, ngoko ulungiselela abantu umthetho omtsha abangazange bawamkele ngaphandle kweyodwa ingxaki eyenziwe ngokwabo (i-PsyOp).
Ndandifuna ukwenza ingoma kuyo kwithuba elithile, kuba umculo uhlala ulunge ngakumbi kunamaphepha. Unokuyifumana iluncedo okanye uza kuyisebenzisa xa uzama ukubonisa abantu indlela esidlala ngayo ngeendaba ezikhohlisayo phantse nsuku zonke.
UPeter M. (ovela kuloo dade othembekileyo kuJerenen Pauw) uphinde wabanjwa
tags: nzulu, deepfakes, ubuso, ifowuni, ubuso, eziziimbalasane, ingoma, iindaba ezibuxoki, imisebenzi, inkinga, yengqondo, psyop, asabela, ku hlaziya, isoftwe, isisombululo, ingoma, umgangatho, tshintshanisa, caciswe, yokuzonwabisa
14 Juni 2019 kwi-08: 04
Ukuba ndifunda iimpendulo kwi-nu.nl kwaye isisombululo siyimfuneko 💉😉
Ngokomntu, ndicinga ukuba i-7 kwi-10 ayikholelwa yinto ekhoyo ngoku kunye.
I-Stiff wabhala wathi:
14 Juni 2019 kwi-14: 14
I-Lmfao nu.nl ... eyona mizila elawulwayo yeendaba ... Iminyaka eyi-10 eyadlulayo yinyani, ngoku i-Aids ecocekileyo. Nje nge TPO kwinqanaba elithile, izikhumbuzo ziyifumana kuba zikhuluma ngokugqithiseleyo ngenxa yokuba zixhaphaza kakhulu kwaye zinqula izityalo zasendle. Kungenxa yoko bahlalutya izimvo kwaye unokuphendula kuphela xa unelungu ngokusebenzisa iminikelo.
Ngokwenene unenkabi enzima xa ugijima emva kweendaba kunye nezopolitiko, uhlobo oluthile lokuxinwa kukaMesiya elindele umsindisi. Unabantu abane-70 abaneminyaka elidala ubudala abaneStockholm Syndrome abaye bakholelwa ngokukhohlakeleyo yonke into ebomini babo bonke. Mhlawumbi ayiyi kuba yi-7 / 10 efuna ukugonywa okunyanzelekileyo. Ndicinga ukuba abantu bayagonywa (basesidenge) kodwa akudingeki.
Ngokuqinisekileyo akumele ulinde umntu ukuba asombulule iingxaki kuwe ... qinisekisa ukuba i-chaos isigxina idalwe phezu kweyiphi i-elite ayikwazi ukulawula. Hlala uqhubeke ne-chaos ajenda yokuba i-elite ikhuthaze iminyaka
14 Juni 2019 kwi-11: 03
Hayi ... i-damn it ...
Ndine-tune kwintloko yonke imini!
Ngoko ... abantu abasebenzela umphathi wolawulo, umzekelo:
Ingakumbi musa ukuphulaphula ingoma, kuba unomculo onomdla ngokugqibeleleyo yonke imini, ukuze oogxa bangakwazi ukugxila emsebenzini wabo ukuze bahlale benkqubo! Cinga ...
14 Juni 2019 kwi-12: 00
I-Baudet: ukuyeka ukunyuka kwamanye amazwe nokunyamezela Ngaba unokukwazi ukukhusela nge-talppid keppeltje kwi-israel ... i-israel ethumela abafuduki kwi-europe. I-Lmfao ... nazo zichasene ne-EU kwi-fvd ize zithathe inxaxheba kwipalamente ye-EU. Yeyona ntloni.
14 Juni 2019 kwi-16: 42
Endaweni yam ndiva ukuxubana komculo kaMartin; ukusuka kwimeko enokuthi ibe yinto engalunganga.
Ngokwam uluvo lwam kwaye ukuthanda ukucula kuyinto encinane, kodwa ndicinga ukuba igitare liyinto emangalisayo!
Ngokuqinisekileyo, le ngoma ayiyiyo imveliso eyenziwe kwisikrini esinezixhobo ezifanelekileyo, apho iteknoloji yenza yonke into ibe yenzeke ukwenza ukuba isandi siphuculwe. Ukongezelela, uMartin akasebenzi ukuthengisa, kodwa unomsebenzi omnye: ukubonisa abantu ukuba bahlala entolongweni engabonakaliyo, ngelixa bona ngokwabo banceda ukugcina nokuze kwandisa le ntolongo.
Kodwa yintoni ebaluleke kakhulu into endicinga ngayo ngoma? UMartin uye waba nobuchule kunye nokucacisa kwaye uye wada waya kubeka umphumo kwi-intanethi. Abantu abaninzi benza oku ngokwabo, kodwa uMartin ukhangelelwa ngumkhosi omkhulu we-troll, obamba onke amathuba ukumhlekisa ngaye ngenjongo yokuthulisa.
Xa ndijonga ngapha, ndibona abantu bambalwa kakhulu abanomdla wokuba babe nobuchule kunye nokucacisa. Abantu baziphatha "njengokuba kufanelekile". Ukongezelela, ngokuhamba kwexesha, inkqubo iyalahla abantu ithuba lokudala kunye nokuveza ubuchule babo. Ukuziphatha okunqwenelekayo kuluntu kuxhomekeke kwimeko apho umntu azifumana khona. Nangona kunjalo, yonke into ebizwa ngokuba yinto enqwenelekayo yintlalo ngumphumo wesimo kunye nokufundiswa, okuxhomekeka kwimoya ekhokelayo kunye nenkcubeko. Iqhinga kukubona ukuba le meko yenkcubeko kunye nenkcubeko, kunye nokuziphatha okufunayo, ilawulwa ngokupheleleyo ngabalawuli bamanje, abalawula ngasese inkqubo yonke ehlabathini. Umthetho uphinde uqinisekise ukuba ukuchaneka kokubikezela ukuziphatha okufunayo ubunzima bonyuka, ukwenzela ukuba ubunzima bunokulawulwa kangcono.
Abantu abahlala "njengokuba kufanelekile" abasaqapheli ukuba baphila ngokupheleleyo ngendlela abalawuli abafuna ngayo. Aba bantu bayizimvu ezilungileyo okanye iintlanzi ezifileyo ezihamba kunye nokuhamba. Ezi ntlanzi ezifileyo aziyi kubakho okanye akukho nto iphosakeleyo, kuba ziZombi eziphilayo, ezilawulwa ngokupheleleyo yinkqubo. Intlanzi efile, ephakamileyo, ikwazi ukukhaba iprogram kwaye idla ngokuzulazula ngeempahla okanye izikhwama, iindawo ezinobuninzi kakhulu ezibolileyo kwaye zicolile. Ezi ntlanzi zibambene ngezandla xa zikhohlisa izinto ngenxa yokuhaha okanye ezinye iinjongo ezizimeleyo. Ukongezelela, abo abasemagunyeni abayi kulahla le kholeji ezimhlophe, kuba ezi khola ezimhlophe ziyimfuneko yokuba bakwazi ukulawula abantu ngokulandela imithetho nemimiselo. Uluhlu olulawulayo ngaphantsi, njengabaphathi kunye nabanye ababoneleli ngeenkonzo, ngokuqhelekileyo abaqondi ukuba yiyiphi i-ajenda ajenda ayisebenzayo.
Uza kubona abantu abambalwa nabancinci abazama ukubonisa ubungqina babo bokwenene (ngokuya kuba bakufumene). Igosa elivela kwiofisi ehloniphekileyo ayiyi kubeka le vidiyo kwi-intanethi ngokukhawuleza ... emva koko, akulungile. Iintlanzi ezifile zolu hlobo zinamazwe amanga ayenziwa yi-ego ukuze zigcine kwaye ziza kubonisa kuphela indlela yazo yokwenyani ngendlela engcolileyo.
E-NAZI eJamani kwakukho nabantu abangazange baziphathe njengokuba bekufuneka kwi-thirties. Aba bantu benziwe ubomi bunzima. Ixesha apho siphila khona namhlanje linokuthelekiswa nakuma-1930 ekupheleni kwe-NAZI eJamani. Wonke umntu uyazi oko kwenzeka eJamani naseYurophu yonke. Abantu abafuni ukubona ukuba siphinde siphila ngexesha elinjalo. Abantu abagcina le nkqubo "bahamba" kunye 'nesimo sengqondo esifanelekileyo' abaziphatha "njengokuba kufanelekile". Ngethuba nje lo mqathango uhlala ungamandla okuqhuba abantu, iNdibano yeNtsha yeNtsha iya kuba yinyaniso.
Iinqayi ziza kuMartin ... intlanzi ephilileyo iyazama ukuba yedwa!
14 Juni 2019 kwi-16: 49
Kwaye xa kuziwa ekuculeni, ibanda elikhulu aliluncedo, kodwa andizange ndichithe iiyure zifezekise.
Ngubani owaziyo, mhlawumbi ndiya kwenza oko kamva.
Nangona kunjalo, ndikhetha ukugxila ekubhaliseni amanqaku acacileyo.
Siyabonga ngokuphendula kakuhle!
« Ukuchithwa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', iTump, i-Brexit (kunye nayo yonke into edibene nayo) iqalile
Ukuba iziprofeto ziyazaliseka, ngaba bubungqina bokuba bakholelwa inyaniso? »
ukusuka nge-18 kaFebruwari ngo-2020
Iindwendwe ezipheleleyo: 163.516
Ixesha lokuma ngaphambi kwishelufa lingenanto
Inkqubo yesizwe yokuthintela: "fumana uvavanyo lweeveki ezingama-22!" .. umntwana wakho uya kwenziwa i-hermaphrodite
Ngaba i-IVF kunye nogonyo zikhokelela kwizizukulwana zabantwana abathandanayo?
Ngaba u-André Hazes waphula ngenxa yokuba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
Iibhombu zaseRussia zitshabalalisa iinqwelomoya zaseTurkey, eSyria
SalmonInClick op Ixesha lokuma ngaphambi kwishelufa lingenanto
Cubungula op Ixesha lokuma ngaphambi kwishelufa lingenanto
UMartin Vrijland op Ixesha lokuma ngaphambi kwishelufa lingenanto